Vona-drano: toetra, fampiasa ary zava-dehibe | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 31/03/2021 09:33 | Haitoetrandro
El etona rano tsy inona izany fa ny fipetrahana ny rano aorian'ny nandalovany avy amin'ny fanjakana misy rano mankany amin'ny fanjakana etona. Mba hisian'ny etona rano dia tsy maintsy aseho amin'ny mari-pana akaikin'ny teboka mangotraka izy io. Ity entona ity dia zava-dehibe amin'ny tsingerin'ny hydrôlôjika, ny famoronana ny fiainana ary ny fiakaran'ny maripana.
Noho izany, hofakafakaintsika lalina ny etona rano, ny mampiavaka azy ary ny maha-zava-dehibe azy.
2 Fananganana etona rano
3 Fampiasana etona rano
Tsy inona izany fa ny fanjakan'ny rano misy ny delegasionina rehefa miova ny fombany avy amin'ity fanjakana misy rano ity mankany amin'ny fanjakana misy gazy. Io etona io dia tsy misy loko sy tsy misy fofona, na dia matetika aza dia misy fisehoana fotsy sy rahona rehefa ampifangaroina amin'ny rano kely mitete izay ao anaty rano. Etona rano koa mety hampihena ny fahitana arakaraka ny hakitrokisany ary aiza ianao. Ohatra, hitantsika fa ny etona rano dia azo jerena tsara rehefa mivoaka avy ao amin'ny fandroana isika ary mihidy ny varavarankelin'ny trano fidiovana. Eo no miangona ny etona rano ary mivadika rano rehefa miraikitra amin'ny rindrina.
Amin'ny natiora dia mamokatra ny etona rehefa mafana ny rano ambanin'ny tany amin'ny alàlan'ny fizotran'ny volkano sasany. Ireo fizotran'ny volkano ireo dia miteraka loharano mafana, geyser, fumaroles, ary karazana volkano vitsivitsy. Geysers dia karazana loharano mafana. Ny etona dia azo hamokarana amin'ny alàlan'ny rafitra teknolojika toy ny fantsom-boasary fosily sy ireo reactor nuklear. Amin'izany no ahafantarantsika izany ny etona rano dia loharanon'ny angovo lehibe ho an'ny indostria. Ary ny ankamaroan'ny fizotran'ny famokarana herinaratra dia mihevitra ny fahafahan'ny etona rano mamindra turbines.
Izy io dia azo tsapain-tanana amin'ny andro misy hamandoana avo, amin'ny zavona misy mandritra ny mangiran-dratsy na rehefa mangatsiaka ny tontolo iainana ary fahenina amin'ny rivotra ny rivotra. Ny rivotra ao am-bava dia misy hamandoana sy rano izay onitra amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny rivotra mangatsiaka.
Fananganana etona rano
Andao hojerentsika hoe inona ny fizotrany tena ivoahan'ny etona rano. Ny fangotrahana rano dia fizotra iray ara-batana anaovan'ity singa ity miova avy amin'ny ranoka ho amin'ny fanjakana gazy vokatry ny fiaretana maharitra amin'ny hafanana mahery. Ny hafanan'ny rano mangotraka dia 100 degre. Amin'ireny mari-pana ireny no manomboka mangotraka ny rano. Na izany aza, ny rano dia tsy mila miaina vao misy etona rano.
Raha vantany vao tonga amin'ny teboka mangotraka ilay ranoka dia mifoka ny hafanana hanovana ilay ranoka ho lasa etona, fa tsy miakatra intsony ny mari-pana. Ny rano ranoka rehetra dia hiafara amin'ny fiovana ho etona mandra-pahatapitry ny rano be dia be. Tena mora ny fahitantsika an'io fomba io rehefa mampangotraka rano amin'ny vilany isika. Tokony ho fantatsika ihany koa fa ny hafanan'ny rano mangotraka dia miankina amin'ny tsindry ahazoana milaza zavatra. Ohatra, ao anaty vilany faneriterena iray, ny fandrahoan-tsakafo dia atao haingana kokoa noho ny tsindry ataon'ny vilany, ny hafanan'ny rano mangotraka dia ambany.
Fampiasana etona rano
Araka ny mety ampoizinao, ny etona rano dia manana fampiasana isan-karazany amin'ny faritra maro. Andao hojerentsika hoe inona avy ireo fampiasana rehetra ireo:
Sakafo sterilize: etona rano no ampiasaina mba hanafoanana ireo zavamiaina bitika misy amin'ny sakafo. Maty ny ankamaroan'ny zavamiaina bitika rehefa iharan'ny maripana ambony. Noho io antony io, ny setroka dia ampiasaina hanamorana ny rano na singa sasany toy ny trano izay ampiasaina handrakofana ny fatiantoka.
Fiasan'ny motera: Misy maotera maro izay miasa miaraka amin'ny fandoroana ireo solika fôsily izay manova ny angovo hafanan'ny rano iray ho lasa angovo mekanika. Toy izany no fiasan'ny motera etona.
Atomize: ny atomika dia tsy inona fa ny fanaparitahana ampahany kely kokoa. Izy io dia dingana iray ahafahan'ny singa iray mizara ho ampahany kely dia kely. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny mekanin'ny artifact izay mamela ny ranona hiparitaka amin'ny alàlan'ny famoahana vongan-drano kely toy ny famafazana.
Madio: ny rano no solvent universal. Amin'ny rano dia azonao atao ny manadio karazana zavatra rehetra. Azo ampiasaina amin'ny fanadiovana koa ny etona. Amin'ny alàlan'ny fitaovana mampiasa teknolojia etona voapotsitra, dia mamela ny hampitombo ny herinaratra sy hanadio ireo tasy sarotra kokoa toa ireo izay manangona amin'ny karipetra, fanaka na akanjo.
Hydration: Ny fomba fandrahoana etona dia tena atolotra ho an'ny sakafo salama rehetra satria mamela ny hitahiry ireo vitamina, otrikaina ary ranon-tsakafon'ny sakafo io.
Humidify: maro amin'ireo fitaovana mando no afaka manatsara ny tontolo iainana amin'ny fampitomboana ny hamandoana. Misy karazany maro ny hamandoana miankina amin'ny fitrandrahana rano ultrasound na ireo izay manao izany amin'ny alàlan'ny hafanana. Ity farany dia aleony kokoa ampiasaina mandritra ny ririnina satria mampiakatra kely ihany koa ny maripana manodidina.
Araka ny efa noresahintsika teo am-piandohan'ny lahatsoratra, ny etona rano dia tena zava-dehibe amin'ny natiora. Ny fisian'io rivo-piainana io dia iray amin'ireo tena ilaina indrindra. Ary ny singa tena ilaina amin'ny tsingerin'ny hydrôlôjika dia misy amin'ny fatrany miovaova. Manodidina ny 3% ny salan'isa mifantoka amin'ny atmosfera. Any amin'ny faritra maina kokoa na mangatsiaka be toy ny bao, dia ambany ny fifantohana.
Na dia tsy hitan'ny masony fotsiny aza izy io, amin'ny andro mazava dia misy ny zavona etona. Afa-tsy hoe toy ny entona tsy misy loko na fofona izy, dia tsy tsikaritry ny fahatsapana mivantana, tsy toy ny rahona izay foronin'ny rano ranon-drano ka azo jerena. Io no entona entona maintso be indrindra ao amin'ny habakabaka ary mahery indrindra noho ny firafitry ny simika ao aminy. Mafana ny planeta, mihamaro ny etona anaty rano rehefa nitombo ny tahan'ny etona avy amin'ny ranomasina, farihy ary rano hafa eto an-tany.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny etona rano sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Etona rano
Ny antony mahatonga ny fiakaran'ny tany